က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ်၏ကျွန်း (NMV) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ်၏ကျွန်း (NMV)
က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ် (NMV) ၏တစ်ဦးကျွန်း 2006 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကအုပ်ချုပ်သည်။ ဤသည်အက်ဥပဒေဖြစ်စေအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခံရဖို့တစ် NMV များအတွက်အများအပြား options များထောက်ပံ့:
•ရှယ်ယာနှင့်အတူ Unlimited ကုမ္ပဏီ; သို့မဟုတ်
• Unlimited ကုမ္ပဏီရှယ်ယာမပါဘဲ
နိုင်ငံခြားသားများတစ် NMV အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
က Man ၏ကျွန်း (အများအား "မန်း" ဟုခေါ်) ကိုအိုင်းရစ်ပင်လယ်ပြင်နှင့်ဗြိတိသျှကျွန်းစုတွင်တည်ရှိသောကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Semi-ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (ပြည်တွင်းရေးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်) သည်ဗြိတိသျှမှီခိုနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှအစိုးရသည်၎င်း၏ကာကွယ်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တကမ္ဘာလုံးကကိုယ်စားပြုတယ်။ ပြန်လာအတွက်, လူသား၏ကျွန်းက၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဗြိတိသျှအစိုးရကချေ။ ဒါဟာပါလီမန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်တစ်ဦးနှစ်ဦးအိမ်သူအိမ်သားရှိပါတယ်။ သူမ၏ဘုရင်မင်းမြတ်ဘုရင်မကြီးအဲလိဇဘက်ကျွန်းများအတွက်နောက်ဆုံးမှာတာဝန်ရှိသည်နှင့်၎င်း၏ပါလီမန်ကအတည်ပြုအားလုံးဥပဒေပြဌာန်းဖို့အစွမ်းပေးရမည်။
က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ်အကျိုးကျေးဇူးများ၏ကျွန်း
က Man အဘိဓါန် Manx- ယာဉ်တစ်ခုကျွန်း (NMV) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမြိုးအစားရှိပါတယ်:
• 100% နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများတစ် NMV အပေါင်းတို့၌ရှယ်ယာများကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမအခွန်: က Man အခွန်မပေးချေ၏ကျွန်းအပြင်ဘက်တွင်ရရှိခဲ့အားလုံးဝင်ငွေနှင့်အတူ NMV ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံခြားငွေ 100% ။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: NMV ရဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်အစုရှယ်ယာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများအပါအဝင်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်. ရှေးခယျြဖို့အများကြီး options များရှိသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင် / ဒါရိုက်တာ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တညွှန်ကြားရေးမှူးအတူတူပင်လူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သူလိုအပ်သည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ပိုင်ရှင်များအမည်များကိုမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများတွင်ပေါ်လာပါဘူး။
• အင်္ဂလိပ်: ဗြိတိသျှပိုင်နက်အဖြစ်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
က Man နယူးအဘိဓါန် Manx- ယာဉ်၏ကျွန်း (NMV) အမည်
တစ်ဦးက NMV ကုမ္ပဏီတူညီသို့မဟုတ်ရှိပြီးသားဥပဒေရေးရာ entity အလားတူနာမည်တစ်ခုမယူနိုငျသညျ။ မဟုတ်သလိုလုပ်နိုင်မယ့် NMV
တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်တစ်ကုမ္ပဏီ 2008 ၏ဘဏ္ဍာရေးန်ဆောင်မှုများအက်ဥပဒေ (FSA) အရသင့်လျော်သောလိုင်စင်မပါဘဲယုံကြည်မှုန်ဆောင်မှုပေးပါသည်ခဲ့ရသည်•အသုံးပြုမှုစကားလုံးများကို;
•လုံလောက်သောအထောက်အထားကုမ္ပဏီ၏ကုမ္ပဏီအုပ်စုတစုကိုပိုင်ဆိုင်ဖေါ်ပြခြင်းသည်မဟုတ်လျှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို "အုပ်စု" ကိုသုံးပါ,
•ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ခြောက်လအတွင်းအနည်းဆုံးကုမ္ပဏီအတွက် 51% ၏နိမ့်ဆုံး၏ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမရှိဘဲစကားလုံးက "ဦးပိုင်လီမိတက်" ကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ်
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီအမည်ကိုလက်တင်အက္ခရာစာလုံးကို အသုံးပြု. မဆိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ၏ညျသငျ့လျြောစစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်မှတ်ပုံတင်များအတွက်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်အောက်ပါအမည်အားသုံးစွဲမှုလိုင်စင်လိုအပ်သည်: ဘဏ်များ, ချေးငွေများ, ငွေစု, သမဝါယမ, အာမခံချက်, အာမခံ, reinsurance, တည်ဆောက်ခြင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း, ကောင်စီ, စည်ပင်သာယာ, ကုန်သည်ကြီးများ, ဘဏ္ဍာရေး, နှင့်နိုင်ငံခြားသို့ဘာသာပြန်ထားသောတစ်ဦးယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်ယင်းသို့စကားများ ဘာသာစကား။
NMV လီမိတက်ကုမ္ပဏီများ "လီမိတက်", "ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း", "ကော်ပိုရေးရှင်း", "ပြည်သူ့လီမိတက်ကုမ္ပဏီ" တစ်ခုခုကိုသုံးရန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအတိုကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
NMV Unlimited ကုမ္ပဏီများ (လိုအပ်သောပေမယ့်မဟုတ်) may နှုတ်ကပတ်တော်ကို "Unlimited" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "Unltd" နဲ့အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကကာကွယ်ထားဆဲလ်ကုမ္ပဏီ "Protected ဆဲလ်ကုမ္ပဏီ" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "ကျုံ့သွားစေပါတယ်" တွေကိုအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်နှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးနှင့် ပတ်သက်. တစ်စာချွန်လွှာနှင့်အစည်းအရုံးများ၏ဆောင်းပါးများနှင့်သတင်းအချက်အလက် Submit ။
•ကုမ္ပဏီ၏သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်ရဲ့ option ကိုမှာရွေးနှုတ်တော်မူ;
•မဲပေးခွင့်အပါအဝင်ကန့်သတ်အထူး, ဒါမှမဟုတ် conditional အခွင့်အရေး, ပေးအပ်;
•သာလျှင်တိကျတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက် entitles ။
ထို့အပြင်စာချွန်လွှာသို့မဟုတ်အစည်းအရုံးများဆောင်းပါးများအဆိုပါ NMV ရန်ခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ:
တန်းတူတန်ဖိုးသို့မဟုတ်မပါဘဲ• Issue ရှယ်ယာ;
• Issue ဆုကြေးငွေရှယ်ယာ;
မည်သည့်နိုင်ငံခြားငွေကြေး• Issue ရှယ်ယာ (တန်းတူတန်ဖိုးကိုလျှင်);
သို့သျောလညျးဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာ 1931 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေအောက်တွင်ပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်နိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။ က Man ၏ကျွန်း 2000 ၏ကျွန်းက Man ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်န်ဆောင်မှုများ၏အက်ဥပဒေအောက်မှာလိုင်စင်ရခံရဖို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများလိုအပ်သောကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါရိုက်တာများကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြသည်။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီများဆိုအခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရှယ်ယာရှင်များမှမြတ်များငွေပေးချေမှုကိုမနှိမ်အခွန်လည်းမရှိ။
သူတို့ရဲ့ရှယ်ယာရှင်များမှခွဲဝေပေးဆောင်ခြင်းတဲ့အခါမှာလူသား၏ကျွန်းအတွင်းပိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်း, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စေ့စပ်ကုမ္ပဏီများတစ်ကော်ပိုရိတ်အခွန် 10% နှုန်းအဖြစ်, 10% တစ်ခုအခွန်ရှောင်အခွန်ပေးဆောင်။
•မှန်ကန်စွာအားလုံး NMV အရောင်းအကရှင်းပြသည်;
•တိကျစွာ NMV ၏လက်ရှိဘဏ္ဍာရေး status ကိုဆုံးဖြတ်သည်; နှင့်
ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦး NMV တဦးတည်းမှငါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်အတွင်းအကြားထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
က Man အဘိဓါန် Manx- ယာဉ် (NMV) ၏တစ်ဦးကျွန်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမြိုးအစားရှိပါတယ်: 100% နိုင်ငံခြားသားပိုင်ရှင်တွေမျှအခွန်, privacy ကို, တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်, ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်အင်္ဂလိပ်အရာရှိက language တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။